गर्भावस्थाको समयमा बेसल तापमान
आज मैले आधारभूत तापमानको बारेमा लेखहरू भेट्टाएँ। जताततै उनीहरू लेख्छन् कि गर्भावस्था निर्धारण गर्न सम्भव छ कि छैन। मसँग अझै ढिलाइ छैन, र मलाई पक्का छैन कि म गर्भवती छु कि मात्र जिज्ञासुको रूपमा। । भविष्यको लागि त्यसो गर्न को लागी। भोलि श्री आउनु पर्छ। यो बिहान मैले पहिलो पटक bt मापन गरें। मल उठेको छैन र 10 मिनेट। यो .7 36..7 भयो। र म यस सम्बन्धमा अनुभवीबाट सिक्न चाहन्छु। कुन बीटी गर्भावस्थासँग छ र जब यो हुन सक्दैन। र त्यहाँ कुनै मापदण्ड छ?
<< p> साइटमा साइटमा। 0. 03. 0303040 BB डायरीहरू: 14446 के: रूसी केन्द्र
BT ग्राफिक्स अनुसार, मासिक ढिलाइ हुनु अघि एउटी महिलाले गर्भावस्थाको घटना निर्धारण गर्दछ।
बेसल हार्मोन परिवर्तनमा, यौन महत्वनाले असर गर्दछ: ईस्ट्रोजनहरूले यसलाई कम गर्दछ, र प्रोपिजस्टोन बढ्छ। सामान्यतया, ओभिलेशन पछि, बेसल तापमान degrees 37 डिग्री र माथिको वृद्धि हुन्छ र यस्तै स्तरमा 12 1 14 दिनसम्म रहन्छ।
को तापक्रम बढेको प्रोजिस्टेरनको एकाग्रता बढेको छ, पहेंलो शरीरले संश्वधानको कारण - एक पाकेको अण्डोबाट रिलीजलमा देखा पर्यो।
मासिक धर्मको नजिक, पहेंलो निकाय कमजोर साथ प्रोस्पोजेरनको स्राव र बेसल तापमान कम भयो। यदि यो कहिले हुँदैन र बासल तापमान घट्दैन, तर यसको विपरीत, गर्भावस्थाको घटना बढ्छ।
on 37.2 - 37 37..4 डिग्री। यस्तो उच्च तापमान यो तथ्य हो कि गर्भावस्थाको सुरुवातले प्रोस्पोंजनको स्रावको साथ बढ्दछ, जुन गर्भावस्था संरक्षण गर्न आवश्यक छ: यसले भ्रुण अण्डाको टुक्राहरू रोक्दैन।
उच्च दरहरू बेसल तापमानको उच्च दरहरू गर्भावस्था (months महिना) को पहिलो महिनामा बचत गरिएको छ र बाबजुद गर्भावस्थामा वर्णन गरिएको छ। पछि, बेसल तापमान कम हुन्छ र यसको आयाम जानकारीमूलक हुँदैन।
यदि कन्फर्मेड गर्भावस्थामा आधारभूत तापमान घट्छ र 37 37.2 डिग्री (र विशेष गरी 37 37: 36 36 भन्दा तल राख्छौं भने। Procesterone। र यो एक प्रत्यक्ष खतरा हो (गर्भपात को उच्च संभावना)।
यस मामलामा एउटी महिला तुरुन्तै एक डाक्टरसँग सल्लाह लिनु पर्छ जसले गर्भावस्था संरक्षण गर्नको लागि लक्ष्य राख्दछ। प्राय: जसो प्रोस्पोन्टोनबाट अपर्याप्त कामको साथ, डाक्टरहरूले गर्भवती औषधि डुप्लिशन ड्रग र बचत गर्न को लागी सिफारिश गर्छन्।
गर्भावस्थाको पहिलो months महिनामा मापन बेसल तापमान महिला देखाउँदछ जसले पहिले zb वा अवरोधको साथ गर्भावस्थाको साथ गर्भावस्थामा रहेको छ।
मेरी छोरी 36 36.9 सबै समय थियो, मलाई एक डायरी रेकर्ड गरियो। मला अझै सबै समय उभिएको छैन। अब उनी 10 वर्षको छ। सबै व्यक्तिगत रूपमा छ, डाक्टरले मलाई सामान्य बतायो।
हामी विभिन्न थर्मामीटर + व्यक्तिगत सुविधाहरू प्रयोग गर्दछौं। । ।
डाटाबेसमा गर्भवती ग्राफिक्स देखिने छैन? त्यहाँ केहि छ
BT BE BT 36.4 days दिनसम्म। एम हिजो वा आज सुरु हुनु पर्छ। के यसको मतलब गर्भावस्था कहाँ आउने छैन? पेटको तल एक हप्ता भन्दा बढि, र छाती र निप्पल्सले चोट पुर्याइरहेको छ। Days दिन पहिले / स्ट्रिप बनायो।
1। मासिक धर्मको बेला, bt घटाइएको छैन, र बढेको छ - गर्भाशयको श्रहोसको मुठेलोको सूजन), महिला बांझपार्सको कारण।
साँझको बीटी कुनै पनि मापन नगर्नुहोस् ! भर्खरको ओछ्यानमा बाहिर निस्के बिना। यदि तपाईं एक घण्टा पहिले शौचालयमा उठ्नुभयो भने पनि तापक्रम अब जानकारीपूर्ण छैन
मलाई भन, कृपया, जब गर्भावस्थामा, तापमान लगभग degrees 37 डिग्री भन्दा माथि छ, दिनको समय भन्दा माथि छ? वा बिहानको बाहिर, ओछ्यानबाट बाहिर निस्किरहेको छ? धेरै धेरै धन्यबाद।
सन्देश 62044545 .. लेखकलाई जवाफ दिनुहोस्: Zhenya स्थिति: अज्ञात प्रयोगकर्ता